Google Assistant dia ho hita amin'ny firenena sy fiteny maro kokoa amin'ny taona 2018 | Androidsis
Google Assistant dia hamely firenena maro kokoa amin'ny taona 2018
Nandritra ny taona 2017 dia nahita fivoarana lehibe teo amin'ny tsenan'ny mpanampy virtoaly izahay. Ireo orinasa lehibe ao amin'ity sehatra ity dia manana mpanampy azy manokana. Amin'ny raharahan'i Google dia manana mpanampy Google izahay. Mpanampy iray tadiavin'ny orinasa amerikana hivadika ho iray amin'ireo famaky afovoany. Noho izany, izy ireo dia manosika ity mpamosavy ity amin'ny asany maro samihafa.
Hatreto, voafetra ihany ny fisian'ny mpanampy Google. Ary koa rehefa miresaka fiteny. Saingy, zavatra iray tadiavin'ny orinasa ovaina mandritra ity taona ity. Satria efa nikasa izy ireo mandefa ny mpanampy anao amin'ny tsena maro hafa mandritra ny taona 2018.
Fantatr'i Google fa tsy afaka manao fahadisoana izy ireo amin'ny tsy fandefasana ny mpanampy azy amin'ny tsena maro sy amin'ny fiteny maro kokoa. Indrindra mahita ny fifaninanana goavana izay eo amin'ity sehatra ity miaraka amin'i Siri, Bixby na Alexa. Masiaka ny fifaninanana. Saingy, nanambara izany tamin'ny fomba ofisialy ny orinasa.
Voor het eerst officieel uitgesproken varavarana Google: Google Mpanampy an-tsehatra any Nederland (izahay dia afaka mifidy!) #dnisummit # dni2018 pic.twitter.com/fYyU12FWpD
- Elger van der Wel (@elger) Febroary 15, 2018
Mandritra ny taona 2018, ny Google Assistant dia hahatratra firenena maro. Toa hisy firenena maro izay afaka mankafy ny mpanampy virtoaly an'ny orinasa amin'ity taona ity. Amin'ny bitsika etsy ambonin'ity fehintsoratra ity dia afaka mahita sarintany ianao. Toy izany koa ireo firenena hahatongavan'ny mpamosavy dia aseho amin'ny manga. Ho fanampin'izay efa mankafy azy io.
Anisan'ireo firenena hanana mpanampy mandritra ity taona ity dia firenena toa an'i Brezila, Netherlands, Torkia na Arabia Saodita. Noho izany, ny orinasa dia mitady fanitarana lehibe mandritra ny taona 2018 amin'ity lafiny ity. Mahatratra tsena vaovao amin'ny mpanampy anao.
Araka ny angon-drakitra omen'ny orinasa azy, ny fitomboan'ny Google Assistant amin'ny resaka firenena dia 300%. Noho izany, manana drafitra lehibe ny orinasa. Na izany aza, ny fitomboana raha amin'ny fiteny dia somary ambany izy, amin'ity tranga ity 213%. Na dia, amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra hoe rahoviana no hahatratra ireo firenena rehetra ireo. Ka tsy maintsy hiandry kely isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google Assistant dia hamely firenena maro kokoa amin'ny taona 2018
Ahoana ny fomba tsy hampiasana azy amin'ny bokotra antrano.
Tonga amin'ny fanazavana ireo pitsopitsony nivoaka tamin'ny Xiaomi Mi Mix 2S vaovao ... Tena izy io!